I Lazarosy, natsangana ho voninahitr’Andriamanitra
"Ary rehefa ren'i Jesôsy izany, dia hoy Izy: Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny hampisehoana ny voninahitr 'Andriamanitra, mba hankalazana ny Zanak'Andriamanitra" Jao. 11:4.
Tsy fanaovana tsirambina na fandavana ny hanasitrana an'i Lazarosy tsy akory no nahatonga an'i Kristy hitarazoka roa andro taorian'ny nandrenesany fa narary i Lazarosy. Tokony hankahery antsika izany (...) Aoka hitady fitsaharana ao amin'ny Tompo isika, ary hiandry Azy amim-paharetana. Mety tsy ho eo no ho eo araka ny aniriantsika azy ny valin'ny vavaka ataontsika, ary mety tsy ho izay nangatahintsika no ho azontsika. Hanome ny tsara lavitra noho izay nangatahintsika Ilay mahalala ny mahasoa indrindra ny zanany, raha mihazona ny finoana isika ka tsy ketraka. — YI, 06 Aprily 1899.
Tsy ny amin'ireo sakaizany tany Betania ihany no nosainin'i Kristy, fa notsinjoviny koa ny fanofanany ireo mpianany. Nofidiny ho solon-tenany eo amin'izao tontolo izao izy ireo, mba hahatratra ny olona rehetra ny fitahiana avy amin'ny Ray. Noho ny amin'izy ireo no namelany an'i Lazarosy ho faty. Raha nositraniny tamin'ny aretina nahazo azy i Lazarosy, dia tsy ho nisy ny fahagagana izay nanaporofo mazava indrindra ny maha-Andriamanitra Azy.
Tsy maty i Lazarosy raha tao amin'ilay efitra naharariany i Kristy, satria tsy nanam-pahefana taminy i Satana. Tsy afaka nanindrona an'i Lazarosy ny fanindronan'ny fahafatesana raha teo anatrehan'ilay Mpanome aina (...) Navelany teo ambanin'ny fanapahan'ny fahafatesana anefa i Lazarosy, ary navelany hahita ny fametrahana azy tao am-pasana ireo anabaviny ory. Fantatr'i Kristy fa raha nahita ny endrik'ilay anadahiny maty izy ireo, dia ho voahozongozona mafy ny finoany ny Mpamonjiny. Toy izany no nandrantsanany ny sampana, mba hamoazany bebe kokoa. Fantatr'i Kristy fa vokatry ny tolona izay nolalovan'izy ireo tamin'io fotoana io, dia hamiratra kokoa sy hahery lavitra kokoa ny finoan'izy ireo. — YI, 13 Aprily 1899
Ho an'ireo izay mikatsaka ny hahatsapa ny fitantanan'ny tanan'Andriamanitra, dia ny fotoan'ny fahakiviana lehibe indrindra no maha-akaiky indrindra ny fanampian'Andriamanitra (...) Avy amin'ny fakam-panahy sy fisedrana tsirairay no hitondran'Andriamanitra azy ireo ho amin'ny finoana mafy orina kokoa sy fanandramana lalina kokoa. — DA, 528.